Nidaamka Android wuxuu arki doonaa xawaarihiisa oo kordhay saddex jeer | Androidsis
Nidaamka Android wuxuu arki doonaa xawaaraha uu ku kordhay seddex jeer
Android Waxaa laga yaabaa inaad hadda qaadayso tallaabo weyn oo horay loo qaaday ma aha sababtoo ah cusbooneysiinta nidaamka. Maxaa dhacaya haddii xawaaraha fulinta nidaamka lagu dhufto 3 oo wata qalab la mid ah kan maanta jira iyo isla isticmaalka batteriga? Waxay noqon lahayd cajiib, sax? Tani waxay noqon doontaa in la siiyo nolol cusub terminals in ay jecel yihiin HTC G1 Waxaad mooddaa inay gabo-gabo ka marayaan noloshooda.
Shirkad qayb ka ah Isbahaysiga Gacanta Furan wac Koox aan badnayn, waxay u muuqataa inaad awood u yeelatay inaad si weyn u hagaajiso waxqabadka mashiinka farsamada ee aad isticmaalayso Android wac Dalvik. Mashiinkan casriga ah ee cusub ee la soo wacay ayaa lagu soo bandhigi doonaa shirweynaha soo socda ee Mobile World Congress ee Barcelona Dalvik turbo. Codsiyada Android waxa ay ku shaqeeyaan mishiinkan casriga ah oo noociisa cusub waxa suurto gal ah in uu xawaarihiisa ku kordhiyo saddex jeer, waxa u sii dheer in la gaadho isticmaalka habaysan ee batteriga iyo maamulka garaafyada oo la hagaajiyay. Waxay taageertaa soo-saareyaasha ARM, Intel Atom, iyo naqshadaha MIPS
Waa inaan sugno si aan u ogaano haddii mashiinkan cusubi yahay Dalvik turbo waxaa lagu rakibi karaa terminaalka jira ama waxay noqon doontaa oo kaliya in terminalka soo socda ay soo baxaan. Shaki la'aan waxay horumar weyn u tahay nidaamkan qalliinka.
Nala soco Twitter, waxaan nahay @androidsis
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Nidaamka Android wuxuu arki doonaa xawaaraha uu ku kordhay seddex jeer
Tani waa mid aad u wanaagsan, laakiin uma maleynayo in, tusaale ahaan, HTC ay xiiseyneyso in tan lagu dabaqi karo G1, maadaama ay luminayaan iibka, sax?
Haddii tan ay suurtagal tahay in la sameeyo G1 "jiid" noocyada cusub ee Android, isticmaale isku mid ah, ma tijaabin doono inuu beddelo terminaalka.
Jonax, waxa wanaagsan in G1-ku aanu ku xidhnayn HTC, balse uu ku xidhan yahay Google-ka, Google-na waxa uu xiiseeyaa in uu haysto moobilada ugu casrisan ee casriga ah, sababta oo ah waxa ay taasi keenaysaa in aad ku kalsoonaato Google-ka iyo haddii aad doonayso in aad dib u cusboonaysiiso. Mobile waxaad qaban doontaa mid ku xiran Google...
Waxaan jeclaan lahaa inay run noqoto oo nooca Dalvik waxaa wata Android Froyo ...
Waxaan rajeyneynaa in Escapology run tahay oo ay keenaan miro.
Waxaan haystaa Magic 32B Google, waana suurtagal, sababtoo ah ma hubinayo ku dhawaad ​​​​100 × 100 in maalin maalmaha ka mid ah ay ka maqnaan doonto awood ay ku dhaqaajiso noocyada mustaqbalka iyo tan, waxaa suurtagal ah in ay si fiican u laadi doonto
haddii lafteedu tahay nidaam aad u dheereeya qiyaas saddex laab xawliga juuurl wuu socon doonaa wakhtiga
U jawaab erbwan
Qaabab cusub oo maqal ah ayaa ku yimaada nidaamka Android
Swype, waxay kordhisaa xawaaraha teeb gareynta ku saabsan Android